Trailer Stories Stror Trailers waa sida "Amityville Horror on Crystal Meth"
Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh Sheekooyinka Naxdinta leh ee Mareykanku wuxuu u eg yahay "Amityville Horror on Crystal Meth"
Warar Naxdin LehFilimooyin naxdin lehTrailer (filim)
Sheekooyinka Naxdinta leh ee Mareykanku wuxuu u eg yahay "Amityville Horror on Crystal Meth"
Tan kabadan tan oo shaah ah iyo ogeysiisyo tuuritaan ah waxaan ugu dambeyntii heysanaa dherer buuxa oo dhab ah oo buuxa Sheekooyinka Naxdinta leh ee Mareykanka. Layaabka ugu weyn ee aan qaadaneyno waa inaan helno sheeko naxdin leh oo Kirismas ah oo Danny Trejo uu yahay Santa Clause.
AHS ayaa soo bandhigtay xoogaa cabsi ah si loogu maadsado taxanaha soo socda ee AHS. Shalay, waxaan wadaagnay warka ah in wareegga wareegu uu ka bilaaban doono istaag, 1-saac dhacdo ah oo dib noogu celinaysa Gurigii Dilka. Haddii aad dib u xusuusato, Dilkii Guriga ayaa aasaas u ahaa Story naxdin baa American inta lagu jiro xilli ciyaareedkeedii ugu horreeyay.
Xilli kasta oo ka mid ah AHS ayaa ku dhacday mawduuc taageero kala duwan ah. Kan hore wuxuu ahaa Murder House kan labaad wuxuu ahaa Asyum, kan saddexaadna wuxuu ahaa Freakshow, iwm.
Sheekooyinka Naxdinta leh ee Mareykanka wuxuu ka koobnaan doonaa toddobo qaybood oo mid kasta oo ka mid ah uu ka sheekaynayo sheekadiisa saacad gudaheed.
Sidii aan dhahnay, Danny Trejo sida Santa horeyba noogu haystay si aad u badan tan.
Sheekooyinka Naxdinta leh ee Mareykanka wuxuu bilaabmayaa 15-ka Luulyo ee FX iyo Hulu oo leh laba qaybood oo gaar ah hordhac ah. Intaas ka dib, waqti dheer kuma sugno AHS 10 xilli xilli Agoosto 25.
Miyaad ku faraxsan tahay Sheekooyinka Naxdinta leh ee Mareykanka? Noo soo sheeg qaybta faallooyinka.
Qayladu waxay si rasmi ah u dhamaysay wax soo saarkii. Agaasimuhu wuxuu la wadaagay sawir qabow si loogu dabaaldego. Halkan ka eeg.
Sheekooyinka Naxdinta leh ee MareykankaFXHulu
Universal Studio HHN Oo Lagu Soo Bandhigay 'Hunting Of Hill House'
Bandhigga Filimka Chattanooga ee 2021 Dib-u-eegis: 'Marti-Qaade Ku-habboon' Waa Qosol-Qaadi iyo Cunto-Qabo Xaflad Casho ah oo ka dhacday